Goozberị | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ụzọ maka owuwe ihe ubi gooseberries maka oyi, ntụziaka ndị a ma ama
N'oge okpomọkụ na mgbụsị akwụkwọ, ọdịdị na-enye anyị ọtụtụ mkpụrụ osisi tomato, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na iji nweta ụtọ ha n'oge oyi, ndị mmadụ na-eji ụzọ dịgasị iche iche echekwa ha. Otutu vitamin na nri nwere tomato goozberị, nchịkọta nke na-amalite na mbubreyo July - mmalite August. Ebe ọ bụ na n'oge ochie, a na-eji gooseberries eme ihe maka uru ya na ezigbo uto.
Uru na nsogbu nke gooseberries, dị ka tomato na-emetụta ahụ ike ụmụ mmadụ
Ọ bụghị onye ọ bụla maara banyere uru na ọtụtụ ụzọ iji gooseberries, ma beri a bụ ihe oriri dị ụtọ maka efere, nkà mmụta ọgwụ na akụrụngwa maka ihe ịchọ mma. Ihe mejupụtara nke "mkpụrụ vaịn" nke dị n'ebe ugwu bụ mkpụrụ osisi fatịlaịza, nke a na-akpọkwa "agrus" na "mkpụrụ vaịn dị n'ebe ugwu," bụ nke na-eme ka currant.
Esi mee ka goozberị jam: ihe nchịkọta kachasị mma
Goozberị bụ osisi a na-ahụkarị nke nwere ike ịchọta n'akụkụ dị iche iche nke ụwa: ọ bụghị naanị n'ógbè anyị, kamakwa na America, ọbụnakwa n'Africa. Ihe a na-ewu ewu bụ nke kachasị mma n'ihi mkpụrụ osisi ndị mmadụ na-eri ọ bụghị naanị ọhụrụ, kamakwa ha na-egbute n'ụdị jam ma ọ bụ jams.
Kedu ka esi gụkọta gooseberries n'ụlọ: nzọụkwụ site nzọụkwụ nzọụkwụ na foto
Ka ị na-echekwa akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi maka oyi, ọtụtụ maka ihe kpatara uzo goozberị, ọ bụ ezie na beri a na-emepụta mkpụrụ osisi dị oke ụtọ. Na ihe o nwere ike iburu osisi a, ihe ndozi na njirimara nke ichekwa tomato, anyi na-eleba anya karia ihe a. Na-akwadebe gooseberries Maka owuwe ihe ubi maka oyi, ọ dị mkpa iji nnukwu mkpụrụ tomato - ha aghaghị ịdị ike, gburugburu, na-enweghị mmebi ma dents.
Esi esi mee ka goozberị ihe dị mma n'ụlọ: nchịkọta oge nhazi maka anụ ma ọ bụ azụ
Ruo ihe karịrị afọ iri, a na-eri tomato na cutps na mayonnaise, mọstad ma ọ bụ adjika. Ma mgbe ụfọdụ, ịchọrọ ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị menu gị, malite na ihendori. Ejichaghị ya site na tomato, ma site na gooseberries, ọ ga-eme ka anụ anụ kachasị mara mma dị iche iche ma dị ụtọ.
Anyị nile nwere mmasị ịnụ ụtọ jam na oyi. Maka nkwadebe ya jiri mkpụrụ osisi na tomato dịgasị iche. Isiokwu anyị ga-eweta ọtụtụ nhọrọ maka jambe goozberị, dịka onye ọ bụla ga-esi sie nri a na-atọ ụtọ n'ụlọ. Na-akwadebe goozberị Mmalite nke nri bụ otu ihe dị mkpa - nkwadebe nke tomato.
Esi mee ka goozberị mmanya
E nwere ụdị mmanya dịgasị iche. A na-eme ụfọdụ n'ime ha ka ha mee ka akpịrị ịkpọ nkụ gwụ ha, ndị ọzọ, kama nke ahụ, na-ejiri ha mee ihe. Ihe ọṅụṅụ dị otú ahụ na-agụnye mmanya na ihe ọṅụṅụ ha. Aṅụ mmanya na-aba n'anya na-eme site na ihe ndị e kere eke, bụ nke dị na shuga. Mgbe a na-agba ha ume, ha na-adaba n'ime ụlọ dị mfe ma na-emepụta mmanya, gụnyere ethyl.